Daryeelka Mashiinnada Raadinta Miyaad Daryeelaysaa Haddii Aad Isticmaasho Drupal?
Tuesday, April 26, 2011 Arbacada, Oktoobar 15, 2014 John Buluug
Intee in le'eg ayey Nidaamyada Maareynta Mawduucyada (CMS), sida WordPress, Drupal, Joomla !, qayb ka ciyaaraan hagaajinta mashiinka raadinta (SEO)? Xaqiiqdii naqshadeynta goobta xun (ma ahan url nadiif ah, waxyaabo xun, adeegsi xumo magacyada domain, iwm) ee CMS sida Drupal ayaa saameyn ku yeelan doonta SEO (qalab weyn oo loo isticmaalo fikrad xun). Laakiin nidaamyada maaraynta maaddooyinka laftoodu miyay amaahdaan SEO ka wanaagsan kuwa kale, haddii dhammaan dhaqannada kale ee wanaagsan la sameeyo? Iyo, sidee ahaan lahayd